XOG: Midowga Musharixiinta & Madaxweynayaasha Puntland & jubbaland oo kulan gaar ah yeelanaya - Awdinle Online
XOG: Midowga Musharixiinta & Madaxweynayaasha Puntland & jubbaland oo kulan gaar ah yeelanaya
Maalmaha soo socda ayaa waxa la filayaa in Magaalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya ay kulan ku yeeshaan Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya & Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland.
Kulanka ayaa xogaha la helay waxaa ay sheegayaan in looga hadli doono Arrimaha 2021-ka, oo ay hadda dhinacyadu isku hayaan, wuxuuna qabsoomayaa kahor Shirka DFS iyo Dwoald Gobaleedyada ee Muqdisho.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa haatan ku sugan Magaalada Nairobi oo todobaad ka hor uu ku tegay safar aan horay loo sii shaacin, halka Madaxweynaha Puntland la filayo in uu dhawaan tago Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Kulanka dhinacyada ayaa waxaa qeyb ka noqon doono Xubnaha u doorteen guddoonka Musharixiinta Madaxweynaha,halka warar kale ay sheegayaan in Xubno ka socda Somaliland ay shirka ka qeyb-geli doonaan, waxaana ay aad u falan doonaan doorashooyinka lagu muransan yahay iyo waxyaabaha la gudboon dhinacooda.
Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Somaaliya ayaa shirar dhowr ah waxaa uu uga qabsoomay Magaalada Muqdisho, iyaga oo kasoo saaray qodobo ay ku dhliilsan yihiin Madaxda Dowladda Soomaaliya ee la xiriira Arrimaha doorashooyinka.
Hayeeshee kulanka Nairobi uga qabsoomaya Xubnaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya & Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli uu xoogeystay khilaafka diblumaasiyadeed ee u dhaxeeya soomaliya & Kenya, isla markaana dowladda Soomaaliya ay xiriirka u jartay Kenya.
Previous articleXOG: YAA FUDUDEEYEY SAFARADII MUSHARAX KHEYRE DALALKA RUUSHKA IYO QADAR
Next articleXiisad dagaal oo ka dhex taagan Ciidamada dowladda & kuwa Kenyan ah